Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxyadii Muslimiinta Itobiya oo sii xoogaysanaya
Banaanbaxyadii Muslimiinta Itobiya oo sii xoogaysanaya
Inkastoo uu caalamka iska dhaga-tirayo banaanbaxyada ka socday Addisababa oo sanadkii 2aad uu hadda u bilowday, waxaa maanta oo Jimca ahayd isugu soo baxay Adisababa kumanaan muslimiin ah oo ka cadhaysan faragalinta ay dawladda ku haysay arimaha hoose ee muslimiinta.
Waxaan la soconaa in la xidhay tobanaan culumada islaamka ka mid ahaa oo loo aanaynayo inay banaanbaxaya socda ka ambeeyaan hasa ahaatee aanay banaanbaxyadii joogsanin siday filaysay dawladda Itobiya. Dadkan banaanbaxaya ayaa ka soo horjeeda isku dayga ay wadato dawladda Itobiya ee ah inay Golaha Sare ee Muslimiinta (Majlisil Aclaa) loo magacaabo niman ka socda kooxda loo yaqaano Al-Axbaash ee shiicada ah iyadoo muslimiinta ku nool Itobiya ay dhamaantood yihiin Sunada madhabka Shaaficiyada. Arintaasi ayaa abuurtay gadood badan oo dawladda Itobiya ee EPRDF ay u aragto inay abuuri doonto kacdoon balaadhan oo saameeya dadka aaminsan diinta masiixiyada.
Waxay dad badan is-weydiinayaan sababta ay saaxaafadda caalamka uga aamusan yihiin banaanbaxayada ka socda Itobiya, iyagoo isla markaa ka abuuraya wax aan jirin Eretreeya oo kacdoon beenaad aan jirin bishii hore mala-awaalayay, iyagoo ka rajaqabey inay abuuraan gadood shacab iyo kala qaybin bulshada Ertreeya ee midaysan.